Vakuru Vanyori Vemabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi Kurume 21, Zuva Renyika Dzenhetembo, Taida kuita chirevo chakakosha kune avo vadetembi vakuru vemabhuku ekare uye enguva. Ndokutenda kune vanyori ava kuti nhasi tine huwandu hukuru hwemabhuku enhetembo ayo ekuti tizvirasire isu kwete kungofungisisa nezve runako rwe ipfupi uye yakanyanya kurondedzera sezvo iri nhetembo asiwo kuyedza kutevedzera patinenge tichida kugadzira chimwe chinhu chakanaka uye chinonetesa senge chinyorwa chemhando iyi pasina.
Zvakareruka kunge nhetembo dzaGustavo Adolfo Bécquer, Neruda, Darío kana Benedetti, handiti? Vanoti kana mumwe munhu achikwanisa kuita chimwe chinhu chinoratidzika kunge chiri nyore pakuona kwekutanga, imhaka yekuti vari kunyatso chiita nemazvo, kunyangwe chiri chinhu chakaomesesa pasi ... Uye kana nhetembo dzake dzichiripo, mushure mekunge makore mazhinji apfuura kubva pakufa kwevamwe, imhaka yekuti vaive yemhando yepamusoro.
1 Bécquer uye nziyo dzake
2 Pablo Neruda, akarumbidzwa nemumwe mukuru: GG Márquez
3 Benedetti, murume akwegura anodiwa
4 Uye vamwe vazhinji vanyori ...
Bécquer uye nziyo dzake
Becquer akatisiya kare, pazera diki re34, asi asati atisiya tsika nemagariro nhaka kwete chete mhando yavo ngano, asiwo musanganiswa we kunaka uye kusiririsa kwaakatitaurira munhetembo yake.
Nyanduri weSevillian dzimwe nguva aimbodzokorora mutsara we Lamartine (Nyanduri wechiFrench), akataura izvozvo «Lnhetembo yakanakisa yakanyorwa ndiyo isina kunyorwa ». Pamwe airevesa, nekuti kune manzwiro uye manzwiro echokwadi uye panguva imwechete ephemeral zvekuti hatikwanise kuzvinyora mumashoko nekuzvitumidza mazita, asi nokutendeseka, mumaonero angu ekuzvininipisa, kune Bécquer icho chaiva chidimbu chekeke, kana zvirinani zvaiita senge.
Becquer aive mudetembi uyo, pamwe chete nemukuru Rosalia de Castro, kumutswa, vakamutswa, ekurova kwekupedzisira kwasara kwe Spanish Romanticism. Nhetembo yake yerudo pamwe neyekusiririsa, yaizivikanwa nekukosheswa mushure mekufa kwake kupfuura muhupenyu (chimwe chinhu chakaitika kazhinji, zvinosuwisa, kune vanyori vazhinji vekare).
Asi sezvo nhasi riri Zuva reNhetembo uye rinofanira kutaura nezvazvo, ndinokusiira imwe yenhetembo dzinozivikanwa zvikuru uye dzinoverengwa naGustavo Adolfo Bécquer:
Chii chinonzi nhetembo? -unotaura uchirovera
mumudzidzi wangu mudzidzi wako webhuruu.
Chii chinonzi nhetembo? Uri kundibvunza izvozvo?
Pablo Neruda, akarumbidzwa nemumwe mukuru: GG Márquez
Gabriel García Márquez akati Neruda ndiye nyanduri mukurusa uyo mabhuku aive abereka mu s. XX, uye aigona kuwedzeredza kana kwete, asi hapana munhu anopokana nemhando yemabasa ake.
Hupenyu husiri nyore hwaNeruda hunogona kumushandira kuti anyore zvimwe zvakanyanyisa uye zvinoshamisa zvinyorwa, zvisinei, nhetembo yake inotapira, yakanangana nemoyo nekunzwa. Uye kunyangwe paine imwe tambo inosuruvarisa mumavhesi ake, chinonyanya kutonga ndirwo rudo rwakachena, iro rinozvipa pasina kuzvipira kunyange panjodzi yekubirwa zvese ... Uye kana zvisiri, ramba uchiverenga mavhesi aya andinoteedzera iwe mushure meSonnet yake 22:
«Kangani, rudo, ndakakuda ndisina kukuona uye pamwe ndisingarangarire,
usingazive kutarira kwako, pasina kukutarisa, makore zana,
mumatunhu akatarisana, masikati makuru.
waingova hwema hwezviyo hwandinoda.
Pamwe ndakakuona, ndakakufungidzira pakupfuura uchisimudza girazi
muAngola, muchiedza chemwedzi waJune,
kana wanga uri chiuno chegitare ichocho
kuti ini ndaitamba murima uye zvaiita kunge gungwa rakawandisa.
Ndakakuda ndisingazvizive, uye ndakatsvaga ndangariro dzako.
Ndakapinda mudzimba dzisina vanhu netochi kuti ndiba mufananidzo wako.
Asi ini ndaitoziva kuti chii. Pakarepo
pawanga uchienda neni ndakubata uye hupenyu hwangu hwakamira.
pamberi pemeso angu iwe wanga uchitonga, uye vahosi.
Kufanana nemoto wemoto musango, moto humambo hwako.
Benedetti, murume akwegura anodiwa
Kune ichi chikuru Uruguayan munyoriIsu takave nemukana weku "kuva" naye chinguva chidiki nesu, uye kunyangwe kuteerera kuzwi rake achidzokorora dzimwe nhetembo dzake (dzakawanda dzadzo dzinowanikwa paYouTube).
Munyori we mabhuku anodarika zviuru makumi maviri, mazhinji acho rakashandurwa mumitauro inodarika makumi maviri, makore angangoita manomwe apfuura akationekana nesu. Iye akatenda murudo, muhunhu hwevanhu, uye mukureruka, sezvakangoita nhetembo yake, yakapusa uye inokwanisa kunzwisiswa nemunhu wese. Akataura kuti akagadzira nhetembo yakachena, yakapusa uye isina zvishongo zvakawandisa kuitira kuti igosvika kune wese munhu, kuitira kuti munhu wese agone kuzvinzwisisa uye, panguva imwecheteyo, aipfuure. Aifarira vanhuwo zvavo, vanhuwo zvavo, uye pamusoro perudo, zhinji nhetembo dzake dzinoratidza manzwiro uye manzwiro akapiwa kwaari neupenyu rufu. Muchokwadi, rimwe remabhuku ake (andinaro neni) rakatumidzwa zita "Rudo, vakadzi nehupenyu."
Kubva mubhuku iri ndipo pandinoteedzera chidimbu chinotevera, hongu, cheimwe yenhetembo dzake dzekufananidzira:
«Zano rangu ndere
dzidza kuti wakadii
zano rangu ndere
gara mundangariro dzako
Handizive kuti handizive sei
asi gara mukati mako
uye ziva kuti wakataura chokwadi
uye kuti hatizvitengesi
kuitira kuti pakati pezviviri
kana mugomba rakadzika-dzika
kune rumwe rutivi
zvakadzika uye zvakanyanya
kuti chero rimwe zuva
Uye vamwe vazhinji vanyori ...
Uye ini handidi kupedza chinyorwa ichi ndisingaregi kutumidza zita vamwe vadetembi vakuru nhetembo dzakanaka dzavakatipa.
Uye nevamwe vazhinji vasingazivikanwe vadetembi kuti kunyangwe ivo vasingazivikanwe kana kurarama pairi, vanonyora zvishamiso zvikuru zvakagadzirwa kuita nhetembo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vakuru vadetembi veMabhuku
Benedetti murume munyoro, kunyange hazvo chisinganzwisisike wandanga ndichiverenga zvakanyanya ndiBukowski, "murume asina hunhu."
CARLOS ALBERTO FEREYRA akadaro
CHISHamiso CHIRATIDZO CHENYAYA DZAKO
Zunza UPENYU HWEDU /
Siya CHIITIKO CHEZVAKATAMBUDZIKA
UYE ZVE SUMMITS ZVE RUDO MOMENTS
MISODZI ICHIMHANYA PATSVIKA
Pindura CARLOS ALBERTO FERREYRA
Mabhuku matatu ezvekurangana kwechitendero
Mabhuku mashanu ekuverenga chitubu ichi